mardi, 04 avril 2017 19:39
Bianco: Misy mpitondra ambony voasaringotra
Mbola miatrika fanadihadiana ramatoa Claudine Razaimamonjy amin’izao fotoana izao. Maro no zavatra anenjehana azy, ary nolazain’ny eo anivon’ny BIANCO fa tsy resaka fanodikodinana tany Ambohimahamasina no nanaovana izao fanadiadiana azy izao fa ny fandraharana izay ataony, raharaha nanomboka ny 2013 ka hatramin’ny 2016 izy io.
Marihina moa fa ny biraom-paritra Antananarivo sy Fianarantsoa no misahana ny fanadiadiana.
Na inona moa na inona tsindry etsy sy eroa, dia mijoro amin'ny maha izy azy ny Bianco.
Nomarihan'ny Bianco fa olona iray dia tsy mahavita irery kolikoly fa tsy maintsy misy olona ambony tafiditra amin'izany.
mardi, 04 avril 2017 18:41
Mapar: Manameloka ny antsonjay sy ny fomba maloto itantanana ny firenena
Nanao fanambarana androany talata 04 aprily ny biraon'ny vondrona politika Mapar, miaraka amin'ny Prezida Andry Rajoelina.
Manameloka tanteraka ireo antsojay atao amin'ireo olom-boafidim-bahoaka atao amin'izy ireo, manameloka tanteraka ny fomba maloto itantanana ny Firenena, ary mitaky tsy misy hatak’andro ny ampitsaharana ireo fomba mamohehitra sy mampidi-doza atao amin’ity firenena ity.
Endrika fahatahorana ireo tsy mitovy loko aminy izao ataon'ny fitondrana HVM izao hoy hatrany izy ireo, ary indrindra fahatahorana an'i Filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy.
mardi, 04 avril 2017 16:19
Conseil de gouvernement: L'affaire Claudine dans l'ordre du jour
Il n'y a pas plus urgent à Madagascar, le conseil de gouvernement ce jour a largement discuté de l'arrestation de Claudine Razaimamonjy. Bonjour l'indépendance de la justice.
mardi, 04 avril 2017 09:45
Mozean'ny Zandarimarian'i Moramanga : Mila fanavaozana
Natsangana tamin’ny 03 martsa 1967 ary notokanan’ny filohan’ny Repoblika Philbert Tsiranana ny Mozean’ny Zandarimarian’i Moramanga.
Maro ireo trano misy ny tahiry mahakasika ireo sary sy fitaovana samihafa noentin’ireo mpanjanaka tamin’ny andron’ny fanjanahantany sy ny fahampanjaka. Hita ao ohatra ireo tafondro nampiasaina tamin’izany andro izany, tao ihany koa ireo basy maro toy ny Mass 36, Lee Enfield, STG 44, ary ny Pistolet nampiasain’ireo Zandary tamin’ny taona 1800.
Ireo tahiry ireo dia nomen’ny fianakavian’i Jeneraly BORY Jean Paul ho an’ny Mozea.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny Mozea moa dia mila fanavaozana maika ity trano misy ny tahiry ity, satria eo ny fahasimban’ny tafo sy ny rindrina izay mitady hirodana.
mardi, 04 avril 2017 09:25
Fokontany Manga Mahajanga : Trano may vokatry ny tsy fitandremana
Fandrarahana lasantsy tamina moto mbola tao anaty trano no nahiana ho nahatonga ny firehetan'ity trano iray teny amin'ny Fokontany Manga ity.
Sady nitelefaonina no nandraraka ny lasantsy ilay rangahy, ka mety ho izay no niteraka afo. Ny tariby mitondra ny herinaratra tao an-trano ihany koa mandady amin'ny tany raha ny fanazavan'ny tompontrano.
Tsy nisy azo noraisina ny trano efitra enina izay vita amin'ny fanitso ary zara raha nisy tafavoaka ny entana tao anatiny. Tonga ara-potoana ihany ireo Mpamonjy voina saingy nampanano sarotra ny asa ny fitangoronan'ny olona teny an-toerana na dia efa tomefy mpitandro ny filaminana aza.
Fa ny nahavariana ihany koa dia ny fanamian'ireo mpamonjy voina, kapa scoubidou vita amin' ny akora plastika no nanaovan'ny sasany, ny sasany kosa kiraro izay hita fa tsy natokana ho an'ny famonjena voina sady tsy manao fiarovan-doha.
mardi, 04 avril 2017 09:09
Ampohibe-Antalaha : Roalahy mpangalatra lavanila matin'ny fitsaram-bahoaka
Nitrangana fitsaram-bahoaka tao amin'ny Fokontany sady renivohitry ny Kaominina Ampohibe, 20km eo miala ny renivohitry ny Distrika Antalaha tamin'ny 7 ora maraina teo.
Roa lahy mpangalatra lavanila avy tany Antanandava, Kaominina Ampohibe no tra-tehaka tao Ampohibe ka niharan'ny fitsaram-bahoaka avy hatrany ary maty tsy tra-drano avokoa.
Olona voafonja ny iray, izay mampanontany tena ny Fokonolona ny nivoahany, avy ao Antanandava kosa ny faharoa.
Tsy mbola misy mpitandro ny filaminana tonga any an-toerana amin'izao.
mardi, 04 avril 2017 08:54
Ihosy : Mitondra Bajaj ireo andian-jiolahy manafika
Mirongatra ny asan-jiolahy mitam-basy eto Ihosy.
Ny herinandro lasa iny izao dia nisy andian- jiolahy niditra an-keriny tao amin'ny tokantrano iray tao Soanatao eto Ihosy tampon-tanàna.
Rehefa tafiditra izy ireo dia nanery ny tompontrano hanome vola ary efa saika hovonoin'izy ireo ny zanak'ilay ramatoa tao fa noho ny fifanomezan-tànana teo amin'ny manodidina dia voatifitra ny iray tamin'ireo jiolahy ka nandositra. 5 lahy niaraka tamin'ny Bajaj ireto jiolahy ireto.